वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नेपालीको शव विदेशमै अलपत्र : कुन देशमा कति? – RemitKhabar
वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नेपालीको शव विदेशमै अलपत्र : कुन देशमा कति?
काठमाडौं: वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव निरन्तरको लकडाउनका कारण अलपत्र परेको छ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारण ती शवहरु स्वदेश ल्याउन समस्या भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राजनप्रसाद श्रेष्ठले परिवारको अनुमति लिएर विदेशमै दाहसंस्कारको लागि प्रयास भएपनि सहमति पाउनै गाह्रो भइरहेको बताए। उनका अनुसार लकडाउन भएयता परिवारको सहमति लिएर ६ जनाको मात्र दाहसंस्कार सम्भव छ। यीमध्ये यूएईमा ३, सिसेल्समा १, टर्कीमा १ र दक्षिण कोरियामा १ जनाको दाहसंस्कार गरिएको छ। ८ जना मृतकका परिवारले उतै दाहसंस्कारका लागि सहमति दिएको र दाहसंस्कार गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ।
बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका सयभन्दा बढी नेपालीको शव अलपत्र अवस्थामा छ। यूएईमा २१, साउदी अरबमा ३३, मलेसियामा ३०, कतारमा २६, कुवेतमा ७ तथा दक्षिण कोरिया, बहराइन, साइप्रस र ओमानमा एक एक जना नेपाली कामदारको शव अलपत्र अवस्थामा छ।
बोर्डका कार्यकारी प्रमुख श्रेष्ठले कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म वैदेशिक रोजागारीमा रहेका चार जना नेपालीको ज्यान गएको जानकारी दिए। त्यसमा यूएईमा २ तथा टर्की र साउदी अरबमा एक एक जना रहेका छन्। चैत ११ गतेदेखि नेपालमा जारी लकडाउनका कारण विदेशमा रहेका नेपाली आउन सकेका छैनन्।
बोर्डले खाडीका प्रमुख रोजगारदाता देशबाट मात्र तत्काल एक लाखभन्दा बढी कामदार नेपाल आउने स्थितीमा रहेको जनाएको छ। यसमा ४२ हजारभन्दा बढी कामदार करार अवधि सकिएर र बाँकी कामदार अवैधरुपमा बस्नेहरु रहेको जनाइएको छ।
कतारमा १०९ नेपाली ‘डिपोर्टेसन सेन्टर’मा
कतार सरकारले एक सय ९ जना नेपालीलाई डीपोर्ट गर्ने निर्णय गरेपनि नेपालमा जारी लकडाउनका कारण त्यो सम्भव भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतार सरकारले त्यहाँस्थित नेपाली नियोगलाई यसबारे जानकारी गराएको छ।
कतारले त्यहाँको कानुन उल्लंघन गरेका कारण उनिहरुलाई डिपोर्ट गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। नेपाली कुटनीतिक नियोगलाई सर्च एन्ड फलो डीपार्टमेन्टसँग समन्वय गरि आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान कतार सरकारले आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
सरकारले विदेशमा रहेका अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीले त्यहाँ रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगसँग गुजाराका लागि पैसा मागेर हैरान बनाइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
कतारमा कामदारलाई कोरोनाबाट बचाउनेबारे छलफल
थपिए १३ जना कोरोना संक्रमित, एकैदिन २४ जनामा पुष्टि